Node.js 14 Na-abata na V8 Engine emelitere, Nkwado WebAssembly Nkwado, na More | Site na Linux
Ọchịchịrị | | Aplicaciones, Mmemme
Na ụdị ọhụrụ a arụmọrụ pụtara ìhè Amaara m provo na Node.js mbipute 12 na ọ bụ ugbu a kwụsie ike JSON dabere na "akụkọ nyocha" enwere ike ịmepụta ya ma ọ bụ mgbe ihe omume mere. Akụkọ ndị a nyere aka chọpụta nsogbu ndị dị ka iji nnukwu CPU eme ihe, ọdịda nchekwa, na ịrụ ọrụ nwayọ.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara na Node.js 14 bụ nnwale nnwale maka ihu igwe sistemụ WebAssembly (WASI), nke na-enye arụmọrụ ka mma yana nkwado-obe maka ụfọdụ ojiji ikpe. WASI na-enye ngwa "sandboxed" dabere na usoro ọnụọgụ abụọ WebAssembly iji nweta sistemụ arụmọrụ dị n'okpuru site na ọrụ POSIX.
Ke adianade do, Nsonye nke API nchekwa nchekwa mpaghara nke asynchronous site na enwere ike nyochaa azụmahịa site na ọkwa dị iche iche nke usoro, yana ị nweta ihe ndị dị na mpụga (dịka ịkpọ oku na nchekwa data) bụ ihe dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ chọrọ.
Nke a na-enyekarị ozi ịchọrọ iji mata ebe nsogbu na-eme na ngwa gị ma ọ bụ iji chọpụta mgbochi arụmọrụ. Asdị ọdịdị nke Node.js pụtara na azịza asụsụ ndị ọzọ (dị ka ebe nchekwa wired mpaghara) anaghị arụ ọrụ maka Node.js.
Ndị obodo arụ ọrụ na API iji nyere aka soro ma jikwaa ọnọdụ site na oku asynchronous dị iche iche na nsụgharị. Na Etinyela Experimental API Async Hooks iji nyere aka dozie nsogbu a, mana ọ kwụsighi. Node.js 14 na - agbakwunye API ọhụụ ọhụrụ akpọrọ AsyncLocalStorage.
Dabere na ndenye ederede Node.js 14, olile anya bụ na API a kachasị elu nwere ike ịdịkwu mfe karịa ka ọ na-ekpughe obere internals ma na-enye API dị mfe.
Node.js 14 gụnyekwara ọtụtụ mgbanwe dị mkpa na ntinye Node.js Ebumnuche, mgbanwe ndị emejuputara ka emeziwanye nkwekọ dị n'etiti Streams API iji wepu ihe ọ bụla na-enweghị nghọta ma dozie omume nke akụkụ dị iche iche nke isi Node.js. Dịka ọmụmaatụ, "http.OutendingMessage" yiri "stream.Writable" na "net.Socket" na - arụ ọrụ otu "stream.Duplex".
Otu mgbanwe pụtara ìhè bụ na nhọrọ "autoDestroy" ka emeziri ka ọ bụrụ eziokwu na ndabara, nke pụtara na usoro ahụ na-akpọkarị "_destroy" na njedebe.
Finalmente ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu gbasara akụkọ nke na-eweta ụdị ọhụrụ nke Node.js 14, ị nwere ike lelee njikọ ndị a.
Etu esi etinye Node.JS na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ụdị ọhụrụ nke Node.JS, ha kwesịrị ịma na usoro ahụ dị mfe, naanị maka nke a Ha ga-emepe ọnụ na sistemụ ahụ ma n'ime ya ha ga-pịnye otu n'ime iwu ndị a, na-adabere na gị distro.
N'ihe banyere ndị bụ ndị ọrụ Debian, Ubuntu na nkwekọrịta, ha kwesiri itinye ihe ndia:
Ọ bụ maka ndị bụ ndị ọrụ Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ma ọ bụ ihe ọ bụla sitere na Arch:
Ndị ọrụ OpenSUSE, pịnye ihe ndị a:
N'ikpeazụ maka ndị na-eji Fedora, RHEL, Centos na nkwekọrịta:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Node.js 14 biara na v8 nke emelitere, ihe omuma WebAssembly na otutu ihe
HSE, ihe nchekwa ihe mepere emepe, kachasị SSE maka SSD
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Fedora 32, mara akụkọ ya